Raad Raac News Online – Nin hoy ka digtay Tuubooyinka Wasakhda Qaada Maxaa ku kalifey?!!!!
Nin hoy ka digtay Tuubooyinka Wasakhda Qaada Maxaa ku kalifey?!!!!
Faarax November 30, 2012 0
Magaalo ku taal wadanka Shiinaha oo lagu magcaabo Dalian ayaa kooxo ka tirsan ciidanka dabdamiska ahi isku dayeen inay ka soo saaraan tuubooyinka dhulka hoostiisa mara ee qaada waskhda nin halkaasi ka dhigtay hoy mudo dheer.
Kooxdan ayaa waxaa ku war geliyey nin marayey wadda oo maqlay luuqda hees ka baxaysa tuubada uu dulmaro laamiga uu marayey, kaas oo isku deyey inuu la hadlo hase yeeshee uu ka dhega adaygay kadibna uu ku war geliyey dabdamiska si ay u badbaadiyaan.
Ciidanka dabdamiska ayaa xoog u adeegsadey inay ka soo saaraan ninkan goobta qashin mareenka ah, waxana ay su`aaleen sababta ku kaliftey tuubadan oo ay maraan badanaa saxaradda iyo biyaha wasaxda ah ayaa waxa uu sheegay inay tahay hoyla`aan, waxana uuna intaas ku daray in ay wehel uga tahay qabawga daran ee ka dhaca magaaladaas.
Dad goobtaasi ku soo ururay ayaa sheegay in ninkani uu ka tuugsado wadooyinka halkaasi ku dhow aanayna ogayn meel uu ku noolyahay balse ay u malaynayeen qadhmuunkiisa qof ay wax u dhiman yihiin (Waalan).
Seynab Cabdi Warsame
Sawiro: Shirkii Kaluumaysiga Soomaaliya ee Garoowe lagu qabtay oo laga soo saaray talabooyin lagu hormarin karo
October 26, 2017, Comments Off on Sawiro: Shirkii Kaluumaysiga Soomaaliya ee Garoowe lagu qabtay oo laga soo saaray talabooyin lagu hormarin karo
Hambalyo Tahniyad Dhalasho Farxad leh
October 31, 2017, Comments Off on Hambalyo Tahniyad Dhalasho Farxad leh
Daawo: Da’daal gaari doontide
October 30, 2017, Comments Off on Daawo: Da’daal gaari doontide